Warshadda Naqshadeynta Muraayadda Casriga ah ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Piedra
Moodel Maya: MES92
Sawirka weyn ee loo yaqaan 'Huge Mirror Sculpture' ayaa loo qaabeeyey qaab aan la taaban karin, oo u eg likaha aan la taaban karin. Cabirku waa weyn yahay oo qiyaastii waa 2m oo ku habboon in la dhigo gudaha sida farshaxanka qurxinta qurxinta gudaha. Sawirada la farsameeyay si fiican ayaa loo keydin karaa dhibna kuma aha in la haysto in ka badan 50-80 sano. Sidaa darteed haddii aad jeceshahay farshaxanka farshaxan-gacmeedka sidan oo kale ah, fadlan isla markiiba nala soo xiriir. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa qiimo tartan ah tixraacaaga.
Magaca Sawirka: Farshaxanka biraha la soo gaabiyo
Lambarka Shayga: MES92
Qalabka: 316L Aan Bixin ama Bixin
Dhamaad: Gacmo buuxda oo xardhan
Isticmaalka: Farshaxanka gudaha ama farshaxanka guriga gudaha
Qiimo: Noo soo dir dalabkaaga
Xidhmada: Kiiska alwaaxda ee dibedda
Bixinta: TT ama Western Union
Alaabada aan soo saarno
1. Sawirrada biraha
3. Taxaabada naxaas / naxaas / naxaas
4. Resin Sawiradda
5. Xusuus-qorka / Sawirka / Xayawaanka / Kaararka Qaab-Xaraashka
Waxaan si dhab ah u dooranay qalabka wax lagu rakibo, sidaa darteed macmiilku wuxuu ku heli karaa sawirada iyo taswiirta si nabad ah oo gebi ahaanba ah.
1. Waxaan u adeegsan doonnaa xirmada plywood-ka xiran si aan u soo xirxirno farshaxankan, kaas oo ka baxsan dhererka caadiga ah, gudaha gudaha balaastigga ama xumbada si aan u ilaalinno naxdin-gelinta ama looga fogaado isku-buuq.
2. Waxaan kaa caawin karnaa hubinta caymiska buuxa ee alaabadaada hadii aad ka walwal qabto.
3. Xumbo jilicsan oo jilicsan, xarig laba jibbaar adag oo ku go'an gudaha iyo banaanka baakada ayaa si wax ku ool ah uga hortagaya badeecada waxyeelada. Marka ma aha inaad ka walwaleyso dhoofinta in aad heli doontid farshaxanno badbaado leh iyo qaab dhan.
1. Ku saabsan MOQ
S: Waa maxay tirada ugu yar ee amarradaadu?
A: 1 kumbuyuutar / Mashruuc, 100 kumbiyuutar / 50-80cm dherer oo farshaxan yar yar
2. Ku saabsan waqtiga hogaaminta
S: Waa maxay wakhtiga hogaaminta alaabada?
A: Waxay ku salaysnaan doontaa nooca qalabka iyo amarada. Kadib qiyaas ahaan taariikhda la geeyay qiyaas ahaan.
3. Ku saabsan amniga
S: Farshaxanadaadu ma ammaan u yihiin bixinta dheer?
J: Haa, dhamaan sawiradeenu kuma koobna oo kaliya xumbo caag ah, laakiin sidoo kale sanaadiiq alwaax ah oo xoog leh. Waxaa loo diri karaa dalal badan oo shisheeye iyadoon wax dhibaato ah loo geysan.
Hore: Mashiinka Birta Dahabka ah ee Birta Dahabka ah
Xiga: Sawirka Mashiinka Tareenka ee Farshaxanka Birta Weyn
Life Life Dibadda ahama Steel Horse Sculptu ...
Qaab Casri ah oo Qaab Casri ah oo Wareegsan oo Pol ...
Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka
Sawir gacmeedyo bir ah oo lagu sameeyay Kangaroo Xayawaan ah
Bannaanka Large ahama Steel Tree farshaxan Mo ...
Sawirka Sawirka Birta Casriga ah ee Magaalada Park Publicit ...